2015 သို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » 2015 သို့	12
Posted by ခင်ခ on Dec 29, 2014 in Creative Writing | 12 comments
အားလုံး Happy New Year ပါဟယ်။
Kaung Kin Pyar says: Happy New Year ပါ လေးခရေ….
ခင် ခ says: ဒီပိုစ့်လေးမှာ ကနဦးပြန်လည်နုတ်ခွန်းဆက်တဲ့ ကောင်းကင်ပြာရေ ကျေးဇူးပါ။
ခင်ဇော် says: ဟက်ပီး နယူးရီးယား ပါ။
La Yeik says: ဟက်ပီးနယူးရီးယား ဖြစ်ပါစေ အူးခရေ….
kyeemite says: .ကိုခလည်း ကဗျာမြိုင်တော
.စာမြိုင်တောမှ ပျော်ရွှင်စွာနှစ်သစ်ကူးနိုင်ပါစေကြောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: တစ်နှစ် …အသက်ကြီးသွားပြန်ပြီ…
ကိုယ့်ကို ကိုယ် ပြန် ကြည့်ရဦးမယ်…
အသက်ကြီးလာသလို.. ဥာဏ်ရော ကြီးလာရဲ့လားလို့…
uncle gyi says: အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေဗျာ
မြစပဲရိုး says: Same to you ပါ ကိုခရေ။
၂၀၁၅ က တော့ မြန်မာပြည် အတွက် ကောင်းသော သမိုင်းပြောင်း နှစ် ဖြစ်ပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်။
Yae Myae Tha Ninn says: Happy New Year ပါ.. လေးခ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 36
apolo11 says: အားလုံးအတွက် နှစ်သစ်မှာ မင်ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။
Paing Lay says: နှစ်ဟောင်းက စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေ ချန်ထားခဲ့ပြီး နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ လေးခရေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
လုံမလေးမွန်မွန် says: မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ် 2015 ပါလို့…